Ukufakwa kwenkampani elunxwemeni eAnguilla - iiNkampani zaseSwitzerland ezikude nonxweme
I-Nguila sisona siqithi siphambili se-Anguilla archipelago kwiCaribbean. Le yinxalenye yeBritish Overseas Territory kwaye inikezela ngeenkonzo ezahlukeneyo zaselwandle kwiinkampani zamanye amazwe kunye nabangengobemi.
Yi Ukunyanzelwa kweSwitzerland, Abacebisi bebhanki babucala, senza lula i Ukudalwa kwenkampani elunxwemeni kunye ukuvulwa kweakhawunti. Zonke iinkqubo zenziwa zivela eSpain, ngale ndlela, abathengi bethu abanasidingo sokuhamba baye kwilizwe, okwenza yonke imisebenzi ibe lula kubo.
Imfihlo + yokugcinwa kwemfihlakalo + kwiBhanki egcinwe iimfihlo
e zidwelisa njengogqibeleleyo kwerhafu, kuba ihlangabezana nazo zonke iimfuno zokuba: ubumfihlo, imfihlo, imfihlo yebhanki kunye nokungabikho kwerhafu. Ngokuzinza kwezopolitiko okuqinisekileyo kunye norhulumente uzibophelele ngokuqinileyo kuphuhliso lweenkonzo zekhaya.
Ukusuka Ukunyanzelwa kweSwitzerland, iingcali zebhanki zamanye amazwe nezizimeleyo, siyazilawula Umgaqo-siseko wenkampani ese-Belize kunye ukuvulwa kweakhawunti ezona zilungele iimfuno zakho. Sinenkonzo kule mimandla ingaphezulu kwama-40 kulawulo kumazwekazi amahlanu.
Faka inkampani yakho engaselwandle e-Anguilla ngoku!
Kusemthethweni na ukufaka inkampani engaselunxwemeni eAnguilla?
Yenza a Inkampani engaselwandle e-Anguilla Kusemthethweni. Kuya kubakho ukuchasana nomthetho xa umnini wale nkampani engazalisekisi uxanduva lwerhafu kwilizwe lakhe kwaye engachazanga iimpahla anazo phesheya. Ukuba unemibuzo malunga noku, nceda qhagamshelana nathi.
Inkqubo yokwenza Inkampani e Anguilla ifuna umsebenzi weengcali ebaleni kunye neengcebiso ezifanelekileyo ukuze ungaweli kwizitenxo. Nge Ukunyanzelwa kweSwitzerland, Abacebisi bezimali bamazwe aphesheya nabazimeleyo, unokuseta inkampani yakho engaselunxwemeni ngeakhawunti yebhanki ukusuka kwindudu yekhaya lakho, enkosi kuthi umgaqo-siseko weenkampani ezingaselwandle kumgama, ongayi kuba nexhala malunga nento.
Kutheni benenkampani engaselwandle eAngilla?
Uzinzo lwezoqoqosho nezopolitiko
Ulawulo lubonelela ngozinzo kwezopolitiko nakuqoqosho, kwindawo enamashishini. Urhulumente wase-Anguilla uzibophelele kuphuhliso lweebhanki zasekhaya kunye nezezimali.
Iimveliso zangaphandle kunye neenkonzo
OInikezela ngeentlobo ngeentlobo zeemveliso eziselunxwemeni kunye neenkonzo zeenkampani kwihlabathi liphela kunye nabantu abangahlaliyo: Ubumfihlo, imfihlo, ukugcinwa kwemfihlo kwebhanki ...
Iitrasti kunye neziseko
EOlu lawulo luvumela ukudalwa kweetrasti, iziseko, ii-IBCs (iiNkampani zoShishino zamazwe aphesheya), ii-LLCs (iiNkampani zoThwala uXinzelelo) kunye neebhanki ezingaselunxwemeni.
LIinkampani eAnguilla azihlawuliswa rhafu. Ababhatali irhafu kwimali efunyenwe yinkampani engaphandle komthetho, okanye kwizabelo okanye inzuzo yeshishini.
Iibhanki eziphambili ezisebenza eAnguilla